Entrepreneurship – BurmeseHearts
U Ko Ko Htwe ( Chairman of Taw Win Family Co Ltd ) - Sharing experience
1 Lessons in Entrepreneurship, MYANMAR COURSES
လူတိုင်းမှာ ဖြစ်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေ ဖြစ်မလာနိုင်တာ ၊ ဖြစ်လာအောင် အကောင်အထည်မဖော်နိုင်တာ ၊ ဖြစ်မလာသေးတာတွေဟာ အထက်ပါအချက်တွေထဲက တခုခု သို့မဟုတ် တခုထက်ပိုပြီး လိုအပ်နေသေးတာကြောင့်ဆိုပြီးတော့လည်း သုံးသပ်မိပါတယ်။
2 Lessons in Entrepreneurship, IT, MYANMAR COURSES, Myanmar video, Start up
GOOGLE DEVELOPER GROUP (GDG) - DevFest 2015 - Yangon
3 Lessons in Entrepreneurship, IT, MYANMAR COURSES, Myanmar video, Start up
GOOGLE DEVELOPER GROUP are for developers who are interested in Google’s developer technology.
Developer Conference - (DevCon) YANGON 2015 - နည်းပညာ သင်ကြားခြင်းဆုိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ
1 Lessons in Entrepreneurship, MYANMAR COURSES, Myanmar video, Start up
The 5th Developer Conference in 2015 at the MICT Park, Hlaing University Campus, Yangon, Myanmar.
Tech in Asia CONFERENCE 2016 - Singapore
18 Lessons in ENGLISH COURSES, Entrepreneurship, MYANMAR COURSES, Start up
the fifth edition of Tech in Asia’s flagship conference and it is bigger and better than ever.
9 Lessons in ENGLISH COURSES, Entrepreneurship, MYANMAR COURSES
This course cover the fundamentals for buildingasuccessful company
Connecting you to Asia's Startup Ecosystem - E27
38 Lessons in Entrepreneurship
အာရှတလွှားက ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေသူတို့အတွက် နည်းပညာဦးဆောင်သူတွေ ၊ ဖန်တီးသူတွေ ၊ စွံ့ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် နေရာတွေထဲကတခုကတော့ e27 ဖြစ်ပါတယ်။
28 Lessons in ENGLISH COURSES, Entrepreneurship, MYANMAR COURSES, Myanmar video
an introduction and overview of the course on Technology Entrepreneurship